အမေရိကန်အပေါ်ဟက်ကာတိုက်ခိုက်မှု | Apg29
968 online! | Sidvisningar idag: 171 349 | Igår: 156 273 |
အမေရိကန်အပေါ်ဟက်ကာတိုက်ခိုက်မှု"ပတ်ပတ်လည် Alvar" အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင်အပေါ်ရုရှားဟက်ကာတိုက်ခိုက်မှုသို့ဖြစ်နိုင်ချေပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းထဲကကြွေးကြော်ပေမယ်အဖြစ်မြင့်မြင့်မပြည်နယ်ဟီလာရီကလင်တန်၏လေးနက်ထင်ရှားထွက်ကြွေးကြော်ခဲ့ကြသည်။ အနီးကပ်ယေရှုအားတိုက်ရိုက် - သူမကြာမီသူတို့ရဲ့ကိုယ်တော်၌ယုံကြည်သူအိမ်မှာဆောင်ခဲ့လိမ့်မည်! သငျသညျအဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား